Dhul-Gariir Hurdada Ka Kiciyay Bulshadda Oo Laga Dareemay Boorame | Hangool News
Dhul-Gariir Hurdada Ka Kiciyay Bulshadda Oo Laga Dareemay Boorame
Hangoolnews.com:— Shacabka Magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal, ayaa dareen werwer leh ka muujiyay dhul gariir habeen hore laga dareemay guud ahaan magaalada, isla markaana ka hadlay saamaynta uu ku yeelan karo mustaqbalka, haddii aan laga gaashaaman waxyeeladiisa.
Walaaca shacabka Boorame ayaa ka dambeeyey ka dib markii habeen hore saacadu markii ay ahayd labadii iyo badhkii hurdada uu ka kiciyay dhul gariir la sheegay inuu quux weyn watay oo socday muddo dhowr daqiiqadood ah lagana dareemay guud ahaan daafaha magaaladda.
Dhulgariirka habeen hore oo qiyaastiisa aan la sheegin, isla markaana aanay hay’adaha saadaasha hawadu ka hadlin, isla markaana sheegin qiyaasta uu ahaa, ayaa dhinaca kale dadweynaha magaalada Boorame qaarkood dareenkooda ka muujiyeen werwerka uu ku beeray, waxaana hadaldooda ka mid ahaa:
“Guud ahaan gobolka Awdal waxa inta badan ku soo noq noqda illaa dhowr iyo sideetankii dhul gariiro keeni kara khasaare aad u badan haddii aan wax laga qaban.”
Nin kaloo ka mid ah bulshada Boorame, ayaa kaga dareen celiyay, waxaanu yidhi “Xalay (habeen hore) abaaro labadii iyo labaatan waxa guud ahaan laga dareemay magaalada dhulgariir hurdadii ka toosiyey, runtiina lagu qiyaasi karo inuu ka mid ahaa kuwa ugu waaweyn ee ka dhacay gobolka. Laakiin maan maqlin cid wax ku noqotay ama guri ku dumay oo la sheegay.”
Dhulgariirka oo baddi dunnida ka dhaca, ayaa dhinaca kale waxa jira qalab lagu sii saadaaliso halista dhulgariirada, taasoo loo baahan yahay in hay’ada ka hortaga aafada ee Qaranka (NERAD) lagu kaabo sidii ay ku heli lahaayeen khubaro iyo qalabkii ka caawin lahaa.